El Camino: Riwaayad xun oo Movie Movie Cooks ah oo Crystal-Cad u Dhexeysa Lectrosonics | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner iyo Soosaaraha NAB Show LIVE. Wararka Injineerka Warbaahinta
Bogga ugu weyn » News » El Camino: Riwaayad xun oo Movie Movie Cooks ah oo ah Crystal-Clear mix oo leh Lectrosonics
El Camino: Riwaayad xun oo Movie Movie Cooks ah oo ah Crystal-Clear mix oo leh Lectrosonics
Albuquerque, nm (Noofambar 5, 2019) - El Camino: Riwaayad Xarayn ah oo Filim ah ayaa si heer caalami ah loogu soo bandhigay Netflix si ay ugu farxaan taageerayaasha taxanaha ah ee ay ku salaysnaayeen. Isku darka dhawaaqa soosaarka Phillip Palmer si gaar ah ayuu ugu tiirsanaa Lectrosonics Digital Hybrid Wireless® si ay u duubto ku dhawaad ​​wada hadalka iyo dhawaqyo badan oo shilalka iyo jawiga ah oo sida caadiga ah lagu dari doono soosaarka kadib. Shaybaaradiisa ayaa waxaa ka mid ah seddex qaab oo kaladuwan oo qaab dhismeedka ballaaran loo yaqaan 'Venue 2 wideband modular system, side siddeeryada' SMV 'oo loogu tala galay xubnaha jirka, afar gudbiyeyaasha HMA-koronto oo loogu talagay koomaha iyo dhirtada dhirta, labo UHs ah oo waa weyn oo loo adeegsaday' codka Eebbe, 'oo go'an, iyo dhowr isgaarsiin LT ah oo ku saabsan isgaarsiinta waaxda codka.
Palmer ayaa yidhi, "Iskuxirka Wideband waa muhiim marka loo eego tirada dadka ku sii badanaysa ee ay tahay inaan la shaqeyno maalmahan," ayuu yidhi Palmer, "sidaa darteed Lectrosonics Venue 2 waxay ahayd xulasho muuqata. Waa jumlad shaygmount ah oo qaban karta illaa lix qaybood oo soo dhaweynaya, marka waad isku qasin kartaa oo aad is barbardhigi kartaa ranjooyin isdaba joog ah oo ku saleysan waxa gudbiyayaasheeda iyo baloogyada soo noqnoqda ee aad isticmaaleyso.
Awoodda balaaran ee loo yaqaan 'wideband awoodda' - iyo sida fudud ee loo yaqaan 'Lectrosonics' oo sifiican loo yaqaanno marka ay timaaddo isku-darka soo-wareegeyaha iyo isku-beddelka deg-degga ah, ayaa badin lahaa maalintaas mar kale iyo mar kale. “Dadka loo isticmaalay in lagu sawiro New York ama Los Angeles Ii sheeg, 'Waa inay fiicnaataa in debedda laga joogo galbeedka baadiyaha ah ee leh hawo-mareennada bilaashka ah,' ayuu yidhi. Xaqiiqdii, waxaa jira RF aad u fara badan gudaha Albuquerque. Waxaa jira ciidan badan, warshado, iyo ilo-wareejin sida ilo-sheekaysiga hadalka. Waxa subixii furmi kara subaxa gala galabti. Awoodda inta jeer ee ay Lectrosonics bixiso waxay badbaadisay hilib doofaarradayda marar badan! ”
Waa dhererka dheer ee Lectrosonics marka la eego awooda soosaarida gudbinta, iyo tayada codkeeda, taas oo inta badan soo jiidata Palmer. Tani waa hilibka iyo baradhada sumadda, fikradeyda. Aad bay u nadiifsan tahay uguna kalsoon tahay. Range waa wax weyn iyo dhamaan, laakiin hadii calaamaduhu aysan u muuqan wax wanaagsan, taasi micno malahan. Aniga waxaan kujiraa 100-milliwatt mode intiisa badan, iyo marmar, sida alaabada baabuurta-ilaa-gaariga, waxaan kor ugu qaadaynaa rubuc-watt. Laakiin inaad hoos u dhigto saacadaada watta waxay kuu ogolaaneysaa inaad kuxirto khadadka bilaa-waayirka ah ee ugu badan ee aad awoodid qariidadaas aadka u badan. Halkaas ayaa Lectrosonics uu ku guuleystay. ”
Dabacsanaan Tani waxay u oggolaaneysaa kooxda inay duubto inta badan wadahadallada waqtiga dhabta ah, taas oo badanaa ku habboon helitaanka bandhigyada ugu wanaagsan ee jilayaasha. Waxaan runtii awoodnay inaan yareyno baahida ADR sababtoo ah Lectrosonics. Waxaan huwiyay xirmo jirka qof kasta haddii dabeecadda xir xiran dharka ugu yar aysan ka hor imaanaynin. Lahaanshaha jihooyinka dhamaan jilayaasha marwalba waxay yareyneysaa fursadaha hadalka qof in lagu aaso deegaanka. Waxa kale oo ay ina siineysaa dariiqooyin u gaar ah tifaftirayaasha si aan ula shaqeyno haddii ay jilayaashu is dhaafsadaan marka ay hadlayaan. ”
Xaqiiqdii, hal-abuurnimadani waxay saameyn ku yeelatay dhawaaqyo badan oo aan wada-hadal ahayn sidoo kale-nooca ay soo-saareyaasha intooda badani ku dari doonaan adoo adeegsanaya qaabeynta codka kumbuyuutarka iyo Foley. Muuqaal faneed ah oo Jesse uu ku dumay guriga hal mar gacanta ku dhigay Todd si uu uga helo lacag aad u badan oo uu ogyahay inay halkaas ku qarsoon tahay, Palmer wuxuu sharraxayaa sida “Aaron Paul gabi ahaanba uu u jajabiyay taas. Kadibna waxay u weecaneysaa aragtidan dusha sare ee qorshaha dabaqa, halkaas oo aad ku aragtid Jesses badan oo isku dilaya qolal badan hal mar. Isagoo u muujinaya raadintiisa sida muuqata waxay ahayd figrad fiican oo [qoraa iyo agaasime] Vince Gilligan ay ku qiimeysay soosaarida soo saare Judy Rhee. Dejintaas gabi ahaanba waa dhab - waxay u dhiseen sidaas oo kale, oo leh kaamiro ballaadhan oo cagaha u duuban 60 cirka hawada. Iyadoo la tilmaamayo, ma noqon karno tallaalka, sidaa darteed waxaan ku haystay mikrofoonnada bilaa-waayirka ah meelwalba. Ku dhaji wax xoogaa horumar ah, laakiin waxa aad maqasho badankood waa la diyaariyey. Vince waxay jeceshahay dhawaaqyada dhabta ah, iyo Lectrosonics ha noo ogolaato inaan wada helno dhammaantood. ”
Palmer wuxuu intaas raaciyay: “Waxaan sameynay wax la mid ah gaadiidkii sida Chevy El Camino ee horyaalka” Waxaan awoodnay inaan helno dhawaqa gawaarida dhabta ah halkii aan dib ugu noqon laheyn oo aan soo saarnay.
Sida taxanaha asalka ah, El Camino wuxuu soo bandhigey dhowr meelood oo deegaanno aad u xun. Markii la waydiiyey sida qalabkiisu ugu hagaagey xaaladahaas, Palmer wuxuu yiri, “Waxan alaabtaan ku dhex dhigay sheybarka. Qalabka 'Lectro' ayaa si habsami leh u socday sannadihii aan ka fadhiistay hawlgab, waa iibinta halkii aan ku ridi lahaa miinooyinka. Qaybta kale waa, adeeggoodu waa ifafaale. Dhacdada dhif ah ee ay wax dhacaan, Uma maleynayo waqti ay awoodi waayeen inay hagaajiyaan. Waxyaabihii waan kaxaystay meelaha, wasakh baan helay, qoyaan ka dhigtay, garaacay, iyo Lectrosonics had iyo jeer waxay awood u yeesheen inay ka dhigaan sidii wax cusub - had iyo goor aad uga dhakhso badan sidii aan hore ugu qorsheysanaa. Waligey kuma dooran karo soo-saare kale qalabkeyga wireless. ”
El Camino: Filimka 'Breaking Bad Movie' ayaa laga siidaayay tiyaatar xaddidan oo wuxuu hadda ku sii qulqulayaa Netflix.
Si wanaagsan ayaa looga ixtiraamo gudaha filimka, baahinta, iyo bulshooyinka farsamada masraxa ilaa 1971, Lectrosonics nidaamyada makarafoonada bilaa maraakiibta iyo alaabada maqalka ayaa loo isticmaalaa maalin kasta barnaamijyada-muhiimka u ah injineerrada maqalka yaqaan ee shirkadda u hibeeya tayada, adeegga macaamiisha, iyo hal-abuurka. Lectrosonics waxay heshay Abaalmarin Cilmiga Sayniska iyo Teknolojiyadda ah oo loogu talagalay teknoolojiyadeeda 'Hy Hyre Wireless and' ee teknoolojiyadda casriga ah waana soo saaraha Mareykanka oo xaruntiisu tahay Rio Rancho, New Mexico. Ku soo booqo shirkada khadka tooska ah at www.lectrosonics.com.
posts Latest by msmediainc (arki dhan)
Wax Soo Saarista Dhawaaqa Stu Chacon wuxuu ku socdaa adduunka oo dhan isagoo wata Lectrosonics - February 23, 2021
Lectrosonics waxay ku dhawaaqeysaa guuleystayaasha codka waa tartan muhiim ah - February 16, 2021
Soundcheck iyo Checkmate: Roland Winke Records The Royal's Gambit oo leh Lectrosonics - January 26, 2021
Broadcast Engineer Broadcast Engineering Graham Chapman Prmoted toEditor Lectrosonics teknoolojiyada lectrosonics teknoolijiyada casriga ah lectrosonics HMA gudbiyaha Lectrosonics SMV gudbiyaha Qaadashada Lectrosonics Venue2 Waran & Fallaaro Video Engineer 2019-11-05
Previous: Mashiinka Maqaalka Sare ee DNUM 6066 Mic ee loogu magac daray Abaalmarinta PECigious TEC Award
Next: Bandhiga sawirka Studio Internship